Manni murtii Indiyaa dhimma Masjida seenaa qabeessa BAABRII irratti murtii kenne - NuuralHudaa
Manni murtii Indiyaa dhimma Masjida seenaa qabeessa BAABRII irratti murtii kenne
Masjidni seena qabeessi Baabrii jaarraa 16 keessa kaaba Indiyaa magaalaa Ayodhatti jaarame. Masjidni kun bara 1992 keessa hordoftoota amantaa Hinduutiin diigamee ture. Hindoonni lafa Masjida irraa diigan kana mana amantaa isaanii irratti jaarrachuuf kan karoorfatan yoo ta’u, Dhimma kana laalchisuun mana murtii Indiyaatti Muslimoonni himannaa kan dhiheysanii turan yoo tahu, Manni murtichaa guyyaa Kaleessa dhimmicha irratti murtii keennu odeeyfannoon ni addeessa.
Himannaan Muslimootaa fi Hinduu jidduu ture bubbulee jira. Muslimoonni waggaa 460f iddoon sun kan Masjidaa tahuu fi bara 1992 humnaan irraa fudhatamuu ragaa waliin dhiheessan. Hordoftootni amantaa Hinduu immoo ‘iddoo Gooftaan keenya ‘RAM’ itti dhalate’ kanaaf keenya jedhu. Walitti bu’iinsa yeroo sanitti dhalatee tureen lubbuun nama 2000 oli galaafatame jira.
Haaluma kanaan abbootiin seeraa dhimmicha ilaalaa turan 5 sagalee tokkoon ‘iddoon Masjidni irraa diigame, duraan lafa hordoftoota amantaa Hinduuti. Kanaaf isaanumaaf deebifamuu qaba’ Akkasuma lafti hogantoota mana amantaa Hinduu mootummaa Federaalaatiif akka dabarfamee kennamu ajaja dabarsan. Itti fufuunis Muslimootaaf immoo lafti hektaara lamaa akka kennamu murteessan tahuu gabaafame.
Jibbaa Islaamummaa leellisuun kan beekkamu muummichi ministeera Indiyaa Nareendiraa Moodii, duula na filadhaa geggeessaa ture irratti, iddoo Masjidni irraa diigame kana hordoftoota amantaa Hinduuf keenna, akkasumas Mana amantaa Hinduu achitti ijaaramees ni guddisa jechuun dhaadate.
Amina Hassuu says:
As wr wb akkmai
September 28, 2021 sa;aa 5:03 am Update tahe